Varane oo ku wargaliyay saaxiibadiis go’aankiisa kaga aadan mustaqbalkiisa kooxda Real Madrid – Gool FM
Dajiye March 22, 2019
(Spain) 22 Maarso 2019. Daafaca kooxda Real Madrid ee Raphaël Varane ayaa u sheegay saaxiibadiis qolka labiska ee Los Blancos, go’aankiisa kaga aadan mustaqbalkiisa, kadib dhamaadka xili ciyaareedkan.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa sheegay in Raphaël Varane uu ku wargaliyay saaxiibada kula sugan qolka labiska kooxda Real Madrid inuu doonayo inuu baxo dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Wargeysyada kasoo baxa gudaha dalka France ayaa waxay dhawaan muujiyeen rabitaanka Varane ee ah inuu ka tagto garoonka Santiago Bernabéu, sababa la xiriira inuu doonayo in jawiga uu badasho, si uu u raadsado loolan cusub.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in xidigaha ku sugan kooxda Real Madrid aysan layaab ku noqonin hadalka kasoo yeeray Raphaël Varane, maadaama uu horey ugu sheegay qaar ka mid ah asxaabtiis sida aadka ah ugu dhow inuu ku fikirayo ku biirista koox kale ee cusub.
Zinedine Zidane ayaa sabab buuxda u ahaa imaatinka Raphaël Varane ee kooxda Real Madrid, wuxuuna haatan doonayaa kadib dib ugu soo laabashadiisa tababarka kooxda inuu ku tiirsanaado sanadaha soo aadan.
Laakiin hadii uu ku adkeysto Raphaël Varane inuu isaga dhaqaaqo safka kooxda Real Madrid, tababaraha reer France ee Zinedine Zidane ayeey ku adkaan doonta inuu joojiyo.
Pogba oo Faraanti laga sameeyay Dheeman/Diamond ka wada safay ciyaartoyda xulkiisa oo idil.....SAWIRRO+MUUQAAL